ကလေး စစ်သားဟောင်း အောင်ကိုထွေးကို ပုဒ်မ-၅ဝ၅(ခ)ဖြင့် စွဲချက်တင် - Yangon Media Group
ကလေး စစ်သားဟောင်း အောင်ကိုထွေးကို ပုဒ်မ-၅ဝ၅(ခ)ဖြင့် စွဲချက်တင်
ကလေးစစ်သားဟောင်း အောင်ကိုထွေးကို ပုဒ်မ-၅ဝ၅(ခ)ဖြင့် စွဲချက်တင်လိုက် ကြောင်းသိရသည်။ ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်တွင် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် တရားရုံးတွင် တပ်မတော်မှ တရားစွဲဆိုထားသည့် နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ-၅ဝ၅ (ခ)ဖြင့် ကလေးစစ်သားဟောင်း အောင်ကိုထွေးကို ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် တရားသူကြီးက စွဲချက်တင်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ စွဲချက်တင် အမိန့်ချမှတ်မှု နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့ နယ် တရားသူကြီးကအပြစ်ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းရာ အောင်ကိုထွေးက ပြောဆိုခဲ့သော စကားများမှာ ကလေးစစ်သားဘဝအတွေ့အကြုံကို ပြော ခြင်းဖြစ်၍ အပြစ်မရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
စွပ်စွဲခံအောင်ကိုထွေးဘက်မှလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အထက်တန်းရှေ့နေဦးဇော်မင်းလှိုင်က ”ဒီနေ့စွဲချက်တင်တာကတော့ တရားသူကြီးရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်းရှိတယ်။ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးမှာ တရားဝင်ပေးထားတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်။ နှစ်ဖက်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ယနေ့စွဲချက်တင်တဲ့တရားသူကြီးအမိန့်က မှန်တယ်မှားတယ်လို့ စွပ်စွဲခံရသူရဲ့ရှေ့နေတစ်ဦးအနေ နဲ့ကွန်းမန့်မပေးလိုဘူး။ စွဲချက်တင်ပြီးတဲ့အခါ တရားလိုအပါအဝင် တရားလိုကပြထားတဲ့ သက် သေလေးယောက်စလုံးကို ထပ်မံ ပြီးတော့ မေးစရာရှိရင် ပြန်ခေါ် သက်သေအနေနဲ့ခေါ်ယူစစ်ဆေး ခွင့်စွပ်စွဲခံရသူဘက်က အခွင့်အ ရေးရတယ်။ အခုအနေနဲ့ကတော့ စွပ်စွဲခံရသူဘက်က ပြန်ခေါ်သက် သေကို ထပ်မံပြီးတော့စစ်ဆေးလို ခြင်း ဆန္ဒမရှိတော့ဘူး”ဟု ရုံးချိန်း အပြီး မီဒီယာများ၏ မေးမြန်းမှုကို ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ အမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး တရား လိုနှင့် တရားလိုပြသက်သေငါးဦး ကိုစစ်ဆေးပြီးမှ စွဲချက်တင်အမိန့် ချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ¤င်းကဆက် လက်ပြောသည်။ ရုံးချိန်းကို ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက် သို့ ပြန်လည်ချိန်းဆိုခဲ့ပြီး စွပ်စွဲခံ အောင်ကိုထွေးကို စစ်ဆေးသွား မည်ဖြစ်သည်။
အမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး တရား ခံပြသက်သေများအဖြစ် စွပ်စွဲခံဘက်မှ ခုနစ်ဦးတင်သွင်းထားသည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်မှာ ယခုအသက် (၂၆)နှစ်အရွယ်ရှိ အောင်ကိုထွေး သည် (၁၄)နှစ် အရွယ်က ကလေးစစ်သားအဖြစ် စုဆောင်းခံရချိန်မှစ၍ အိမ်ပြန်ရောက်သည်အထိ (၁ဝ) နှစ်ကျော် ဘဝအတွေ့အကြုံများကို RFA သတင်းဌာနအား ရုပ်သံအင်တာဗျူးဖြေကြားခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖြေကြားခဲ့မှုကြောင့် တပ်မတော်မှ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးမြင့်အောင်က နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုပုဒ်မ -၅ဝ၅ (ခ) ဖြင့် တရားလိုပြုလုပ်ပြီး ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၈ ရက်က ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်တရားရုံးသို့ ဦးတိုက်လျှောက်ထားတိုင်တန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပုဒ်မ-၅ဝ၅(ခ)သည် နိုင်ငံ တော်အစိုးရကိုဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကိုဖြစ်စေ ထိခိုက်သည့်ပြစ်မှုကို တစ်ဦးတစ်ယောက် သောသူကကျူးလွန်ချင်လာအောင် အများပြည်သူကိုသော်လည်းကောင်း၊ အများပြည်သူ၏သီးခြားလူစုကို သော်လည်းကောင်း၊ ကြောက်ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း တစ်ခုခုဖြစ်စေရန် အကြံရှိလျှင် သို့တည်းမဟုတ် ထိုသို့ ဖြစ်စေတန်ရာသည့် အကြောင်းရှိလျှင် ထိုသူကိုနှစ်နှစ်အထိ ထောင် ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ် ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ခုလုံးဖြစ်စေချမှတ် ရမည်ဟု ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ဘောလုံးလောကမှ ရော်နယ်ဒင်ဟို တရားဝင် အနားယူ
မြဝတီမြို့တွင် ယာဉ်အရှိန်ပြင်းစွာ မောင်းနှင်ရာမှ ရပ်တန့်ထားသည့် ယာဉ်ကိုတိုက်မိ၊ ယာဉ်မောင?
အထောက်အထား ခိုင်မာစွာ ပြနိုင်သူများကိုသာ ဒေါ်လာ ရောင်းဝယ်ပေးရန် ဘဏ်များသို့ ဗဟိုဘဏ် ညွှန်ကြ?
တရုတ်ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်များ၏ အနုပညာကြေး တားမြစ် ကန့်သတ်ခံရ
ဟာဇက်ကို အထူး အခွင့်အရေးပေးရန် မလိုကြောင်း ဆာရီ ရှင်းလင်း